Diintaadu waa juqraafi – Kaasho Maanka
Diimuhu ma laha qiimo iskii u muuqda oo lagu garto xaq iyo baadil kan ay yihiin, ee hadba waa sida qofka iyo bulshadu u aragto. Oo diin waliba dadka rumaysan waxay ugu muuqataa xaq muqaddas ah, oo aan loo baahnayn in sina shaki iyo muran loo galiyo. Laakiin, isla diintaasi kuwa aan rumaysnayn waxay ugu muuqanaysaa waalli iyo doqonnimo isbiirsaday, oo loo baahan yahay in ruuxa garaadka lihi iskala weynaado. Tusaale ahaan, ruuxa muslimka ahi wuxuu yaab iyo ashqaraar u dhintaa kolka uu arko Jabbaan samaynaya tiknooloojiyada casriga ah tii ugu danbaysey, oo si silloon –waa sida caamadu u arkaane- ugu sujuudaya cad dhagax ah. Si taa liddi ku ahse isla Jabbaankaasi wuxuu yaab iyo amakaag u dhimanayaa markuu arko muslim salaad tukanaya ama labo qayd qaba oo kacbada dawaafaya. Mowqifkaasina waa mid naxasuusinayaa maahmaahda Soomaaliga ah ee tiraahda: ” Maan dad waa mudacyo afkood”.
Sida la og yahayna, diinta waa loo dhashaa ee lama qaato, oo caadi ahaan qofku ma qaato diin uu ku qancay markuu baaray ka dib, balse wuxuu qaataa diintii uu ka soo gaaray waaridki iyo bulshada uu la nool yahay, xaqa iyo baadilkana wuxuu u yaqaan hadba sidii aabbihiis iyo deriskiisu ugu sheegeen ama ku soo ababiyeen, oo xaal wuxuu isugu biyo shubtaa “Innaa wajadnaa aabaa’anaa …../ Aabbayaalkeen baaan ka soo gaarnay” iyo “Caado laga tagaa caro Allay leedahay”, taa awgeedna, waxaan aragnaa barafisoor Hindi ah oo si taqwo iyo khushuuc badan u caabudaya sac, isaga oo aan marna isweydiin halka sacu qiimahaas ka keenay. Si taa la mid ah, Soomaaliga geel jiraha ah ee aan wax akhrin waxna qorin, ee ay dhici karto in uusan salaad iyo soon toona aqoon, islaamka wuxuu u haystaa walax mucjiso ah, oo aan marna muqaddisnimadiisa laga hadli karin. Farqiga qura ee u dhexeeya barafisoorka iyo geel-jiruhuna waa in midkood ku dhashay Hindiya, ayna dhaleen waalidiin Hinduus ahi, halka kan kale ku dhashay Soomaaliya, ayna dhaleen waalidiin Muslim ahi.
Akhristow bal isweydii diintaadu waxay noqon lahayd haddii aad ku dhalan lahayd Mumbey, ama Tookiyo, ama Moosko, ama Rooma, Ama Tal-Abiib, waalidkaana asal ahaan ka soo jeedi lahaa ummadaha dhulalkaas degga. Sidoo kalena aan isweydiinno waxay noqon lahayd diinta wadaaddada diimaha kala duwan haddii qolo kastaa ka soo jeedi lahayd dhul aan ahayn midka qadartu ku abuurtay. Tusaale ahaan, soo ma dhici kari lahayn in wadaaddada buudigu yahuud noqdaan, kuwa yahuudduna masiixi, masiixiguna muslim, muslimkuna diintii kale ee la doono, cawaantuna muslimiin muwaxidiin ah. Run ahaantiina, waa dhif iyo naadir in dunida laga helo ruux haysta diin uu qaatay ka dib markii uu ku qancay xaq nimadeeda.
Ummadaha kala aamminsan diimaha iyo dhaqamada kala duwanina waxay nabad iyo xasillooni ku wada noolaan karaan haddii qolo kastaa qaddariso diinta iyo dhaqanka qolada kale. Dhibka iyo isku dhacanu waxay imaanayaan marka qolo tiraahdo annagaa saxsan inta kalena waa khaldan yihiin, annagaa ilbax ah inta kalena waa cawaan, annagaa Eebbe na doortay inta kalena ibliis baa durbaan u tuma, annagaa xaqa haysanna inta kalena waa baadil, annagaa jannada galayna inta kalena naartaa loo dareerinayaa.
si falsafetsan ayaad uga hadashay waana kugu raacat Jaalle. sii wad😉
Quraanka maad ka soo horjeedaa?
Reply to Ahmed cumar
Qoraanka iyo islaamka Soo nagama Soo gaarin carab suaashan iiga jawaab sideen ku xaqiijinkaraa in ay diinta islaamka saxtahay Kuna diidikaraa diimaha kale,? Digniin hana ila aadin qoraan iyo maxamed carab waayo ma aamininsani
Wadaadka Soomaaligu ma laha fikir dhalad ah oo ku socda danta bulshadiisa ee waa wax uu ku matalayo wadaadka Carbeed. Waxba ma hindiso waxbana ma qoro wadaadku, iyada oo asal ahaan aqoonyahannimadu tahay in wax la qoro si waxaa loo barto, loo darso, loona dhiteeyo. Caalim kasta oo uu sheegto waa arday Carbeed oo weligii kilkisha ku sita buug uu qoray wadaad Carbeed oo isaga mar jaamacadda ka la...
Jawaabaha aan waafiga ahayn ee Quraanka
Haddii aad quraanka akhriday waxa aad marar badan aad isha ku dhufatay odhaah soo noq-noqonaysa oo u dhigan sidatan "Waxay ku weydiinayaan... - ويسألونك" iyada oo laga hadlayo dadkii waqtigii Maxamed noolaa ee aan rumayn nebinamadiisa, kuwaas oo isugu jiray Yuhuud iyo Carab intooda badani sanamyo caabudi jireen.
Deeqo Afro Jidhkeeda iyadaa leh!
Maalmahan waxaan ku arkeyey baraha bulshadu ku kulanto dad badan oo ku mashquulsan hab lebiska fanaanada caan baxday ee Deeqa Afro. Soomaalidu waa dad aan runta isu sheegin, qofka Soomaaliga ahi xataa naftiisa runta waa kala dagaalama oo waa dad dhalanteed Ku nool. Dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dumarkan teendhada madaw(Xijaabka) ku dhex jira ee isu haysta inay karaamaysan yihiin ama isla quman ma...
W/Q: Salmaan Barkhadle 18th May 2020